FBC - Timaatima nyaachuun kaansarii mar’ummaanii ittisa: qorannoo
Timaatima nyaachuun kaansarii mar’ummaanii ittisa: qorannoo
Finfinnee, Caamsaa 08, 2009 (FBC) Timaatima nyaachuun tatamsa’ina kaansarii ittisuuf akka gargaaru qorannoon tokko eereera.
Kuduraa jaallatamaa kana qola isaa waliin guutuusaa nyaachuun gama kaansarii mar’ummanii ittisuun gaheensaa olaanaa ta’uun dhaga’ameera.
Qorannoowwan kana dura geggeffaman timaatimaa fi kuduraawwanii fi fuduraawwan bifa diimaa qaban keessatti kan argamu keemikaalli Laaykootiin jedhamu Kaansarii ittisuuf humna akka qabu mirkaneessuunsaanii kan yaadatamudha.
Qorannoon haaraa Itaalii Wiirtuu Qorannoo kaansarii Meerkoogiliyaanootti geggeffame ammoo humni kaansarii ittisuu timaatimaa Keemikaala Laayikopiin waliin kan wal-argu miti jedheera.
Barreessaan qorannuchaa Daani’eel Baaroon akka jedhanitti timaatima qola isaa waliin affeellees ta’e dheedhiisaa nyaachuun kaansariin akka hin babal’anne fi akka hin guddanne gochuun garasitti akka balleessu qorannuchi mirkaneesseera.
Qorannucha irratti kan hirmaatan Piroofeesar Antooniyoo Jiirdaanoo gamasaaniin argannoon qorannuchaa carraaqii mala ittisaa kaansarii mar’ummaanii argachuuf taasifamuuf gahee olaanaa akka qabaatu himaniiru.
Qorannuchi gahee timaatimni dhibicha ittisuuf gumaachu eeruun garasitti, itti-aansuun mala wal’aansaa dhibichaa haaraa barbaaduuf daandii niqajeelcha jedhameera.
Kaansariin maru’ummaanii yookiin kaansariin garaachaa addunyaa keenyaarratti dhibee baay’ee beekamu miti.
Haata’u malee, Biritaaniyaatti waggaa waggaan namoonni kuma 7 dhibee kanaan niqabamu.
Oduuwwan Biroo « Addunyaa irratti du’a guddattoota irra qaqqabuuf sababni sadarkaa tokkoffaa qabatu balaa tiraafikaati jedhame	Faayidaa Kitaaba dubbisuu! »